शरीरमा कोठी छन्- आफ्नो भविष्यको रहस्य जान्न सक्नुहुनेछ! « Palpalkhabar
शरीरमा कोठी छन्- आफ्नो भविष्यको रहस्य जान्न सक्नुहुनेछ!
२९ असार २०७८, मंगलवार ०४:०६
ज्योतिषका अनुसार हाम्रो शरीरमा बनेका ती कोठीहरू सहजै हुँदैन, तर हाम्रो भविष्यको रहस्य तिनीहरूमा लुकेको छ। शरीरको विभिन्न भागहरूमा बनेको कोठीको महत्त्व के हो। तपाईं आफ्नो भविष्यको रहस्य आफै जान्नु हो।
त्यस्ता व्यक्तिहरू मायालु स्वभावका हुन्छन् ज्योतिष अनुसार, यदि तपाईको निधारमा कोठी छ भने, यसको मतलब यो हो कि तपाईं सुरुमा संघर्ष गरेर धनी हुन सक्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ, ओठमा एक तील हुनु भनेको व्यक्ति धेरै मायालु प्रकृति हो। त्यस्ता व्यक्तिहरूको एक भन्दा बढी व्यक्तिको साथ प्रेम सम्बन्ध हुन्छ। यदि तपाइँको गालामा कोठी छ भने, यसले तपाइँको आकर्षणलाई बलियो पार्दछ। यस्ता व्यक्तिहरू आकर्षक हुनुका साथै धेरै धनी हुन्छन्।
पारिवारिक अवरोधहरु को सामना गर्नु पर्छ। मानिस जसको छातीमा कोठी छ, उनीहरुलाई पारिवारिक अवरोधहरुको सामना गर्नुपर्छ। परिवारका सदस्यहरूसँगको समन्वयको सम्बन्धमा समस्याहरू हुन्छन्। खुट्टाको तलको कोठीले सधैं व्यक्तिलाई घरबाट टाढा लैजान्छ। जे होस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले जीवनमा ठूलो सफलता पनि पाउँछन्। अर्कोतर्फ, पेटमा कोठी भएका मानिस धेरै धनी हुन्छन्। यद्यपि त्यस्ता व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य प्रायः कमजोर हुन्छ।
रातो कोठी राम्रो भाग्य र दुर्भाग्यको कारण कालो कोठी बाहेक, हाम्रो शरीरमा रातो कोठीहरू पनि छन्। ती दुबै राम्रो भाग्य र खराब भाग्य को प्रतीक हो शरीरमा आफ्नो स्थान को अनुसार। यदि रातो कोठी अनुहारमा छ भने, त्यस्तो व्यक्तिको विवाहित जीवन समस्यामा पर्दछ। छातीमा रातो कोठी भएको व्यक्तिमा विदेश गएर पैसा कमाउने सम्भावना हुन्छ।
हातको बिचमा कोठीको समृद्धिको कारण यदि हाम्रो हातको बीचमा एक तिल कोठी छ, जुन कुनै पर्वतमा छैन भने, यसले समृद्धि प्रदान गर्दछ। यदि पहाड वा औंलाहरूमा तिल छ भने, यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ। त्यो पहाड जसमा कोठी रहेको छ, त्यस पर्वतलाई बिगार्दछ। कोठी जुनमा अवस्थित छ, त्यो ग्रहलाई कमजोर गर्दछ।